Bambee- A 360 Degree HRM Platform: Ramangwana ReKutsvaga - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Iwe uchiri kunetsekana kuhaya nekuchengetedza tarenda repamusoro? Bambee.com ipuratifomu yekuhaya yakazvitsaurira inoita kuti kuhaya mushandi kunetseke uye nyore. Kana iwe uchitsvaga wakazvitsaurira HR maneja, Bambee inopa huwandu hwezvinhu zvinotora imwe yekushushikana kubva kune yako bhizimisi. Bambee yakazivisa kuvhurwa kwayo kwetsva uye itsva Human Resource Management (HRM) chikuva che startups uye Small-Medium Enterprises (SMEs). Chikuva, chine zita Bambee HRM, mhinduro yakasarudzika iyo inogonesa mabhizinesi kugadzirisa mabasa avo ehutengo nemutengo unodhura. Inopa mabhizinesi madiki nematurusi anodiwa kuti vaunze padhuze nevashandi vavo, nekupa chaiyo-nguva yekugadzirisa uye ruzivo rwekuita kwevashandi. Kuti uwane rumwe ruzivo ndapota shanyira webhusaiti yedu.
1. Kukosha kweHR Management
Basa remaneja weHR kuronga uye nekumisikidza kuitwa kwehurongwa hweHR musangano. Mamaneja eHR anofanirwa kuona kuti sangano rinoenderana nemitemo yazvino yevashandi munyika. Ivo zvakare vanoona kuti vese vashandi vanoziva izvo zvinotarisirwa kwavari nekodzero dzavo mukati mesangano.
Rimwe remabasa akakosha anofanirwa kuitwa nemaneja weHR kutsanangura zvinotsanangura hupenyu hwevashandi. Muenzaniso weizvi ungave wekuwana tsananguro dzakajeka dzekuti zvinorevei "hupenyu hwekushanda" mukati mekambani, kutsanangura mitsara munzvimbo yebasa sezvo ichibatsira kugadzira tarisiro kune vese vashandi, uye kuona kuti hutungamiriri hunonzwisisa chaizvo zvinotarisirwa kwavari . Rimwe basa rakakura maneja weHR anofanirwa kutarisira nderekuona kuti vese vashandi vanoziva nezvekambani iriko uye / kana ramangwana marongero uye vari kuita gadziriso inodiwa kutevedzera ivo. Sezvambotaurwa, kana iro basa re human resource maneja chaiye weiye 'muchengeti' (munhu anoona nezvekuti mitemo nemitemo zvishandiswe musangano rese), ipapo ruzivo rwakanaka rwemamiriro epamutemo munyika yese rinenge rakakosha, kunyanya kana mabasa ari mukati sangano rinochengetwa rakavanzika kubva kune vamwe vashandi.
2. Mashandisiro aVashandirwi neVanotsvaga Jobho Bambee
Vashandirwi vanoshandisa Bambee kuti uwane akanakisa ekutsvaga HR. Bambee ine yakasimba yekutsvaga algorithm iyo inobvumidza vashandirwi kutsvaga vanyoreri neruzivo rwakananga, hunyanzvi, uye ruzivo. Iyo app zvakare inobvumidza vashandirwi kutumira mabasa mune chaiyo-nguva uye vane vanotsvaga basa vanyorere iwo mabasa ipapo ipapo. Iyo Bambee inoshandiswa sei nevanotsvaga basa. Yedu data inotaurira nyaya yemazana apfuura evanyoreri vatakave nawo kuburikidza nesuwo redu. Isu tinounganidza ruzivo kune mumwe nemumwe anonyorera, kusanganisira yavo zita remabasa, nguva inoshandiswa kukambani, uye zvidzidzo zvinodzidziswa panguva yekuhaya. Kubudikidza neruzivo urwu, isu tinokwanisa kuratidza izvo zvinorehwa nebasa uye kuti kambani yakatarisana sei parizvino. Tevere, isu tinogovana kuti vangangoita musarudzo vanogona kunyorera chinzvimbo nekutumira yavo kutangazve, tsamba yekuvhavha, uye / kana yakazara basa kutumira.
Rumwe ruzivo rwakakosha rwakatorwa panguva yekubvunzurudzwa kwekudya ndeyezvinoitika nhoroondo yebasa remushandi pamwe nekambani uye chero zviitwa zvinoonekwa nemunyori. Zvese izvi ruzivo zvinodyisa mukati medu Bambee gore rinobata zvirimo zvemukati izvo iye chete anenge achikumbira anokwanisa kuwana. Mushure mekuongorora iyo data, iye anenge achinyorera anotumira chikumbiro icho chinozoongororwa nechikwata. Iyo yekushandira timu inobvumidza kana kuramba vavhoterwa munguva chaiyo-nguva, ichivagonesa kuti vateedzere kubudirira kwavo kwekushandisa munzira.
Chii Chinoitika Tevere Mushure meKubudirira Jobho Kutumira?
Mushure mekubvumidzwa kwekupedzisira kubva kuboka revashandirwi, kunyorera kwako kunozogamuchira email ine yavo yakasarudzika zvinyorwa. Iyi yakasarudzika rondedzero ichave iri yekutanga nhanho mukumisikidza ye evanhu vezvenhau kusadziviririka. Rondedzero yacho inogona kugoverwa paFacebook, LinkedIn, Twitter, Google+, uye dzimwe nzvimbo dzinotarisirwa nekambani kugovera kushambadzira. Nenguva, kuvapo kwekambani yako kuchave pachena pa evanhu vezvenhau Mapuratifomu uye avo vanofarira kushanda nekambani yako vanogona kuuya kwauri.
3. Nei Uchifanira Kuhaya Mushandi Izvozvi Uye Kwete Gare gare
Iwe pamwe haudi vashandi ikozvino, asi unozovada gare gare. Ukasahaya vashandi izvozvi, zuva richauya apo paunozozvidemba. Sarudzo ndeyako. Bambee ndiyo inokurumidza uye inonyanya kushandisa-inoshamwaridzika yakatsaurirwa HR Platform ye startups uye SMEs. Iyo HRM chikuva chakavakirwa zvachose pane yazvino tekinoroji, ichiita kuti ive yakachengeteka, inowanikwa, uye inoenderana. Mukatiya zvishoma, startups uye maSME anogona kuseta otomatiki yekubika uye yekubhadhara system yevashandi vavo, kunyorera mibairo, kuyananisa mashandiro evashandi otomatiki uye kuona mamiriro ekumirira kudomwa kwevashandi. Zvose izvi zvinotora nzvimbo blockchain, zvichiita kuti chikuva chekushandisa-hushamwari kune vese bhizimisi Varidzi uye startups zvakafanana.
Bambee nyowani HRM chikuva chinoumbwa nemazhinji akakosha mashandiro, rimwe nerimwe rakagadzirirwa kuita kuti zvive nyore kumabhizinesi kuronga, kuita, uye kugadzirisa avo human resource (HR) zvirongwa. Kunze kwekupa mukana wekuwana ruzivo rwakadzama rwevashandi, basa rega rega rinozvigadzirisa kutevedzera, bhajeti reSME, uye mushandi paneboarding mhinduro. Iyo papuratifomu yose inogona kugadziridzwa uye kuongororwa kuburikidza neAI-based dashboard. Nekubatanidza zvine hungwaru blockchain mashandiro mus seam mune avo aripo HR masisitimu, ivo vavambi vanopa nekukurumidza uye scalable mhinduro dzinoenda kure kupfuura chinyakare mubhadharo, zviwanikwa zvevanhu, payroll/accounting, uye mabasa ekuhaya. Kunze kwekupa mhinduro kuvashandi, iyo HRM chikuva ichabatsirawo startups munzira dzakawanda. Nokushandisa blockchain-akavakirwa mabasa sechikamu chekushanda kwayo kwepakati, Bambee's platform inopa startups kuwana kumari, scalability, uye mari yekuchengetedza iyo yavanogona kushandisa zvinobudirira. Zvinhu izvi zvinobatsirawo startups kuderedza njodzi dzine chekuita nenjodzi dzekushanda uye matanho ekudzikisa njodzi.
4. Bambee inoratidza sei kuva 360 HR manejimendi software
Kuti unzwisise sei Bambee inogona kukubatsira ne360 degree HR manejimendi, mumwe anofanirwa kunzwisisa kuti iyi software inoshanda sei. Iyo Bambee software ine zvinoshamisa zvinhu izvo zvinoita kuti ive yakakura chikuva chekuhaya yakatsaurwa HR.
Akazvitsaurira HR Manager
Yakajeka HR Kuongorora
Mitemo yeHR inoenderana
Vashandi Onboarding & Kubviswa
Nyanzvi HR Nhungamiro
Vashandi Kudzidziswa & Kubudirira
Shandira Off Yako Plate & Runyararo rwePfungwa!
Bambee yakavambwa nepfungwa yekuti munhu wese bhizimisi inofanira kuwana inokwanisika human resource maneja uye zvese bhizimisi inogona kumhanya sekambani yeFortune 500. Bambee chikuva inokupa iwe akazvitsaurira HR maneja anokubatsira iwe kugadzira HR mutemo, kunzwisisa kuteedzera, vashandi uye kupinza basa, kunzwisisa basa-hupenyu chiyero, manejimendi evanhu, 360-dhigirii manejimendi evashandi. Inokupa izere kure kure HR rutsigiro, inowanikwa kubatsira nerunhare, email, kana kutaura. Iwe unogona kuzvitora sekuwedzera kwechikwata chako. The Bambee timu zvakare inokubatsira iwe mukukwira kwechikwata, kumisa, uye kutora matanho ekugadzirisa zviri nyore uye zvakachengeteka. Kubva pakushungurudzwa pabonde & kusarura kuenda kuPTO uye zororo rekurwara, isu tichakubatsira iwe kugadzira nekushandisa mutemo weHR pane yako. bhizimisi. Makakatanwa mazhinji epabasa anogona kudzivirirwa nekudzidziswa kwakafanira uye dzidzo. Iine anopfuura 500+ makosi uye zvinhu zvekudzidzisa Bambee inogona kukupa iwe maturusi ekugadzira nzvimbo iri nani yekushanda.
????????Iwe Unenge Unopenga Kupotsa Bambee!????????